VideoCAVE,aMixed Reality application – NAB Show News by Broadcast Beat. Official Broadcaster of NAB Show, Producer of NAB Show LIVE
ကှတျချ S7 / i ပြည့်အဝ Frame က Plus အားမှန်ဘီလူးပထမဦးစွာရွေးချယ်မှု NAB စာနယ်ဇင်းပွဲမှာ Sony ကဗင်းနစ် CineAlta ကင်မရာနှင့် Crystal နဲ့ LED Display ကို System ကိုခင်းကျင်းပြပေးပါရန်
PrimeTime အင်ဂျင်နီယာများကို LED အသံလွှင့်စတူဒီယိုအလင်းများတွေမှာ Passive အအေးခံခြင်းနှင့်အတူ
Wisycom DP က Nicholas Donnelly နှင့်အတူကမ္ဘာ့ဖလားသွားလာ
IBC 2018: TVU ကွန်ယက် MediaMind ပလက်ဖောင်းအော်ပရေတာ, Get Make နှင့်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုကိုမျှဝေပါဘယ်လောက်မှ AI အတာဘိုထပ်တိုးပေးသည်
ကမ္ဘာ့ဖလားလက်ဝှေ့စူပါစီးရီးလာမည့် Cruiserweight နောက်ဆုံးအဘို့အ streaming ခိုးကူးချွတ်တိုက်ထုတ်မှမိတ်ဆွေ MTS ရွေးကောက်
Trickbox တီဗီဘီဘီစီ One ရဲ့အံ့မခန်းဂယ်ရီ Barlow ဖျော်ဖြေပွဲများအတွက်ဧဒင် Sessions ကို TV မှ OB ်ဆောင်မှုများပေး
ဝိပဿနာရုပ်သံလက္ခဏာတွေဒတျချြ Telco KPN နှင့်အတူဗိုလ်မှူးဖြန့်ဖြူးသဘောတူညီမှုရ
Aja သင်္ဘော Desktop ကိုဆော့ဝဲ V1 အတူ KONA HDMI, KONA 14.2 ပြီးတော့ IO အိုင်ပီ
Rising Sun ကရုပ်ပုံများကိုချဲ့ထွင် Studios နှင့်န်ထမ်းများ
Soliton H.265 မိုဘိုင်းကုဒ်ပြောင်းကိရိယာဇူလိုင်လ 2018 မက္ကဆီကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲများ၏လွှမ်းခြုံ enable
QYOU Instagram ကို TV ပေါ်မှာခေါင်းဆောင်များ Up ကိုနေ့စဉ် (HUD) အီလက်ထရောနစ်အားကစား format ကိုစတင်ဖြန့်
ASG အားကစားဗီဒီယို Group မှစပွန်ဆာနှင့်အတူအားကစားဗီဒီယိုစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များထောက်ပံ့
Broadpeak® IBC2018 ပြသခဲ့သည်ကို Preview
DMC Interra စနစ်များ '' QC ဖြေရှင်းချက်နဲ့အတူအကြောင်းအရာအရည်အသွေးနှင့်လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုကောင်းစေ
crystal Vision ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အိုင်ပီပလက်ဖောင်းနှင့် IBC 2018 (Booth 2.C28) မှာလျှော့ချ-စျေးနှုန်း chroma keyer ပြသ
တီဗီ2ဘာဂန်နှင့်အော်စလိုအဆောက်အဦမှာ IDS ၏အသုံးပြုမှုကိုချဲ့ထွင်
Home » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » VideoCAVE တစ်ဦးရောနှောထားသော Reality လျှောက်လွှာ
VideoCAVE တစ်ဦးရောနှောထားသော Reality လျှောက်လွှာ
VisualMedia ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ NAB မှာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူနှင့် never.no အဖွဲ့သည်တက်, လူမှုရေးအကြောင်းအရာ Real-time 3D visualization များအတွက်ဘက်ပေါင်းစုံဖြေရှင်းချက်
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူ, စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် Real-time 3D ဂရပ်ဖစ်နှင့်ကို virtual set ကိုဖြေရှင်းနည်းများနှင့် never.no ပေးထံအပ်နှံအထူးကုကုမ္ပဏီ, လူမှုတီဗီအာကာသအတွင်းရှေ့ဆောင်တွေ, ကြေညာဖို့ဂုဏ်ယူ VisualMedia, ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်အခြေခံအမြင်အာရုံဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူမှုတီဗီအကြောင်းအရာကိုဖန်တီးရန်တစ်ဦးတို့ပူးတွဲတီထွင်, ဘက်ပေါင်းစုံဖြေရှင်းချက် feeds ။
ဒါဟာဖြေရှင်းချက်ဥရောပ 2020 Horizon မူဘောင်အစီအစဉ်တွင်စီမံကိန်း VisualMedia ခေါင်းဆောင်များအဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးကုမ္ပဏီတွေရဲ့မိတ်ဖက်ထံမှထွက်ပေါ်လာသောဖြစ်ထွန်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းသည်ထုတ်လွှင့်မီဒီယာကဏ္ဍတွင်ဖန်တီးမှုစက်မှုလုပ်ငန်း၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်မယ့်တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ဥရောပကော်မရှင်တို့ကငွေကြေးထောက်ပံ့နေသည်။ မှာ NAB ပြရန်, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူနှင့် never.no လူမှုမီဒီယာအထဲကနှုတ်ယူသည့်အချက်အလက်များ၏အမြင်သဏ္ဌာန်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဘက်ပေါင်းစုံဖြေရှင်းချက်တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် TV ပေါ်မှာလူမှုမီဒီယာကိုတင်ပြမယ့်မြန်ဆန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုသရုပ်ပြထိုဒေတာများကိုမောင်းနှင်ဂရပ်ဖစ်၏ Real-time 3D တင်ဆက်မှုကို အသုံးပြု. feeds ။
VisualMedia နှစ်ဦးစလုံးသည်ယခင်ကလူမှုရေးမီဒီယာကနေကိုစုဝေးစေခြင်းနှင့်ပုံဖွဲ့စည်းခဲ့အကြောင်းအရာဖော်ပြရန် never.no ရဲ့လူမှုရေးတီဗီပလက်ဖောင်းအတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်အတူနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူရဲ့ SmartTemplates ၏တန်ခိုးပေါင်းစပ်ပြီး, နည်းပညာများ never.no နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူပေါင်းစပ်။ ဒီနည်းပညာကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်သုံးစွဲသူများကိုစုသိမ်းနှင့် web ပေါ်မှအလယ်အလတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုသက်ဆိုင်သော template ကိုရွေးပြီးအကြောင်းအရာတစ်ခုသော graphical visualization preview နိုင်ပါလိမ့်မည်။ Real-time 3D ဂရပ်ဖစ်ပြီးတော့အလွယ်တကူ On-ဝေဟင်မှထွက်ကစားတိုက်ရိုက်ဘို့မဆိုထုတ်လွှင့်မယ့်လုပ်ငန်းအသွားအလာမှထုတ်ဝေနိုင်ပါသည်။ ဒီအထုတ်လွှင့်ပြသနှင့်အဓိက Screen, ဒုတိယမျက်နှာပြင်သို့မဟုတ်မိုဘိုင်း application များပေါ်မှာပြသနိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခံရဖို့ဖြစ်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကို select လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူလွတ်လပ်စွာသည်အခြားဂရပ်ဖစ် application များအနေဖြင့်လေထုစနစ်တကျလူမှုမီဒီယာ content တွေကိုကယ်ယူခွင့်ပြုပါတယ်။
သုံးပြီးသူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့နောက်ထပ်နည်းလမ်းများရှာဖွေစူးစမ်းနေချိန်မှာဖြစ်သူ Scott ဒေးဗီးစ်, never.no ၏ CEO ဖြစ်သူအဆိုအရ "ကိုစုသိမ်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲရှုပ်ထွေးသောဒေတာနှင့်အမြင်အာရုံဆွဲဆောင်မှုနှင့်ပြောင်းလဲနေသော format နဲ့ကထုတ်လွှင့်ရန်စွမ်းရည်ကိုထုတ်လွှင့်အခြားရွေးချယ်စရာအကြောင်းအရာဖော်ပြရန်ပိုကောင်းနည်းလမ်းတွေကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြု ဒုတိယ screen နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာဒေတာ။ "
"နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူသည့်ပရိသတ်များအတွက်နားလည်ပြီးတန်ဖိုးထားဖို့ပိုကောင်းနိုင်ကြသည်တစ်လမ်းအတွက်အဆင့်မြင့်ဒေတာ-မောင်းနှင်ဂရပ်ဖစ်တင်ဆက်ထားပါတယ်အတွက်အလွန်အမင်း-အတွေ့အကြုံရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ never.no ကနေလာမယ့်စွမ်းအားလူမှုရေးမီဒီယာဒေတာမှ real-time 3D ရှုပ်ထွေးသောဒေတာများကိုခင်းကျင်းပြသ၌အကြှနျုပျတို့၏စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအတွေ့အကြုံကိုလျှောက်ထားရန်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ် "Francisco ကIbáñez, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူရဲ့ R & D စီမံကိန်းများညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူစက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် Real-time 3D ဂရပ်ဖစ်များနှင့်ထုတ်လွှင့်, အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကော်ပိုရိတ်တင်ပြချက်များအဘို့ကို virtual set ကိုဖြေရှင်းချက်ပေးထံအပ်နှံအထူးကုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ထုတ်လွှင့်ပေါင်းမြောက်မြားစွာငယ်များနှင့်ဒေသတွင်းဘူတာအများအပြားအပါအဝင် 2,500 အတွက်၎င်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်, ကတည်းကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 1993 တပ်ဆင်ထက်ပိုရှိပါတယ်။ www.brainstorm3d.com
never.no ရဲ့လူမှုတီဗီပလက်ဖောင်းအတ္ထုပ္ပတ္တိသတင်းများ, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်အားကစားထုတ်လုပ်သူများအဘို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်အဖြစ်ကြော်ငြာအေဂျင်စီများအပေါ်-ဝေဟင်ဖြစ်ရပ်များအတွက်လူမှုရေး element တွေကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့တာဝန်ပေးဆောင်ရွက်။ အတ္ထုပ္ပတ္တိရဲ့လွယ်ကူသော-to-ကိုအသုံးပြုဖို့အမြင်အာရုံ interface ကိုအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူများနှင့်အေဂျင်စီများအလိုလို, ကိုစုသိမ်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူ-generated နှင့်အဓိကဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုက်များမှပထဝီတည်ရှိပြီးအကြောင်းအရာ aggregating အားဖြင့် programming နဲ့ကြော်ငြာသို့လူမှုရေးအကြောင်းအရာများထည့်သွင်းခွင့်ပြုပါတယ်။ အတ္ထုပ္ပတ္တိတစ်ခုက iPad, တက်ဘလက်, PC ကိုသို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းကို အသုံးပြု. ၎င်းတို့၏ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ကြော်ငြာနှင့်အတူအပြန်အလှန်မှကြည့်ရှု enable ပြုလုပ်အဖော် app များကိုမောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်။
never.no ထိုကဲ့သို့သောက Sky, အယ်လ်ဂျာဇီယာ, CBC, Channel ကို 4, ITV, Fox ကအားကစားအဖြစ်ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်အပါအဝင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းရှိပါတယ်, အား NBC Universal, QVC, SMG, Televisa နှင့် SWR ။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: ပိုမိုသိရှိလိုပါကသို့မဟုတ် high resolution ကတော့ပုံရိပ်တွေများအတွက် Amaya ဇာလဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် press@brainstorm3d.com
ရှင်ပေါလု Rodriguez1952-2017 - အောက်တိုဘာလ 1, 2017
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူရစ်ဖစ်များနှင့် Template-based Solutions ၎င်း၏တိုးပွား Reality ပိုကောင်းစေပါတယ် - မေလ 30, 2017
VideoCAVE တစ်ဦးရောနှောထားသော Reality လျှောက်လွှာ - မေလ 30, 2017
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ 3D ဂရပ်ဖစ်နှင့်ကို virtual set ကိုဖြေရှင်းချက် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB16 nabshow SmartTemplates VisualMedia	2017-05-30
ယခင်: SmartSet, template ကို-based တိုးပွား Reality နှင့်အသေးစားထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ရဲ့ Virtual သတ်မှတ်ပေးသည်
နောက်တစ်ခု: နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူရစ်ဖစ်များနှင့် Template-based Solutions ၎င်း၏တိုးပွား Reality ပိုကောင်းစေပါတယ်
Pingback: Google က()
Archives လကိုရွေးချယ်ပါ ဇူလိုင်လ 2018 (527) ဇွန်လ 2018 (869) မေလ 2018 (871) ဧပြီလ 2018 (831) မတ်လ 2018 (780) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (685) ဇန်နဝါရီလ 2018 (605) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (396) နိုဝင်ဘာလ 2017 (712) အောက်တိုဘာလ 2017 (835) စက်တင်ဘာလ 2017 (608) သြဂုတ်လ 2017 (583) ဇူလိုင်လ 2017 (710) ဇွန်လ 2017 (543) မေလ 2017 (621) ဧပြီလ 2017 (695) မတ်လ 2017 (704) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (340) ဇန်နဝါရီလ 2017 (364) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (608) နိုဝင်ဘာလ 2016 (344) အောက်တိုဘာလ 2016 (556) စက်တင်ဘာလ 2016 (622) သြဂုတ်လ 2016 (1056) ဇူလိုင်လ 2016 (532) ဇွန်လ 2016 (414) မေလ 2016 (505) ဧပြီလ 2016 (713) မတ်လ 2016 (743) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (382) ဇန်နဝါရီလ 2016 (122) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (358) နိုဝင်ဘာလ 2015 (327) အောက်တိုဘာလ 2015 (152) စက်တင်ဘာလ 2015 (259) သြဂုတ်လ 2015 (440) ဇူလိုင်လ 2015 (276) ဇွန်လ 2015 (140) မေလ 2015 (128) ဧပြီလ 2015 (435) မတ်လ 2015 (289) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (298) ဇန်နဝါရီလ 2015 (131) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (103) နိုဝင်ဘာလ 2014 (194) အောက်တိုဘာလ 2014 (149) စက်တင်ဘာလ 2014 (381) သြဂုတ်လ 2014 (250) ဇူလိုင်လ 2014 (287) ဇွန်လ 2014 (363) မေလ 2014 (231) ဧပြီလ 2014 (744) မတ်လ 2014 (560) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (427) ဇန်နဝါရီလ 2014 (289) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (137) နိုဝင်ဘာလ 2013 (545) အောက်တိုဘာလ 2013 (290) ဇူလိုင်လ 2013 (26) မေလ 2013 (13) ဧပြီလ 2013 (1) မတ်လ 2013 (2)0(306)
ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်း Internship (2018 Fall)
XR Interaction ဒီဇိုင်နာ
အသံအင်ဂျင်နီယာ, စတူဒီယို 360
အဆင်သင့်အက်ဥပဒေနိဒါန်းအပေါ် NAB ထုတ်ပြန်ချက်
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "VideoCAVE တစ်ဦးရောနှောထားသော Reality လျှောက်လွှာ" ။ http://www.broadcastbeat.com/videocave-a-mixed-reality-application/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။